DEG-DEG: Everton Oo Sii Wadda Wacdaraheeda Suuqa Iyo Xiddig Kale Oo Ay Heshiiskiisa Ku Dhawaaqday - Gool24.Net
DEG-DEG: Everton Oo Sii Wadda Wacdaraheeda Suuqa Iyo Xiddig Kale Oo Ay Heshiiskiisa Ku Dhawaaqday
October 5, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Kooxda kubadda cagta Everton ayaa ku dhawaaqday inay lasoo saxeexatay difaaca kooxda kubadda cagta Norwich City ee Ben Godrey.
Tababare Carlo Ancelotti ayay kooxdiisu wacdaro ka dhigtay suuqa iibka ciyaartoyda, waxaanay hore ula soo wareegtay afar ciyaartoy oo wax badan ka beddelay hannaankoodii ciyaareed, isla markaana sababay inay hoggaanka u qabtaan horyaalka Premier League.
Everton ayaa si u dhamaystiray saxeexyada Allan, Abdoulaye Doucoure, James Rodriguez iyo Niels Nkounkou, kuwaas oo durba si buuxda u saldhigay Merseyside oo kulamadii ay ciyaareen tayo cusub oo sarraysa kusoo kordhiyey.
Carlo Ancelotti oo doonaya inuu Everton ka dhigo koox horyaalka kula tartanta naadiyada waaweyn ee Manchester United, Liverpool, Manchester City iyo Chelsea ayaa waxa uu maalinta ugu dambaysa suuqa iibka ciyaartoyda uu ku guuleystay saxeex uu ku xoojinayo boosaskii uu dareemayay inay kooxdiisu u baahan tahay inay iska kaabto.
Everton ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay heshiis shan sannadood ah la gaadhay difaaca kooxda Norwich City ee Ben Godfrey oo ay kusoo iibsadeen lacag dhan £25 milyan oo Gini oo marka dambe gaadhi karta illaa £30 milyan oo Gini.
Laacibkan 22 jirka ah ayaa markii uu saxeexay heshiiska waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo Everton, waxaanu yidhi: “Sharaf ayay ii tahay inaan u saxeexo Everton oo aan qayb ka noqdo kooxdan weyn.”